Cunnooyinka - Wax Walboo Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato Si Aad Miisaanka Ugu Weyso | Cuntada Nutri
Cunnada Miisaanka oo yaraadaana waa hawl dad badan u taal. Waana midda jirta in bulshada hadda jirta ee aan ku noolahay, yeelashada shay wanaagsan ay noqotay wax aasaasi u ah in la ilaaliyo xaalad bulsho oo wanaagsan.
Laakiin ma aha oo kaliya ku saabsan luminta miisaanka, waxaa muhiim ah in lagu sameeyo xakameyn, caafimaad iyo ka fogaanshaha saameynta baqdinta laga cabsado taasi waxay kaa dhigeysaa inaad kordhiso culeys marka aad dhameysato cuntada inta aad lumisay inta ay howshu socoto.
Qeybta cuntada ee Nutridieta waxaan kuugu soo bandhigeynaa dhammaan macluumaadka faahfaahsan ee ku saabsan faa'iidooyinka iyo qasaaraha cunno kasta, si aad awood ugu yeelato inaad ilaaliso silhouette wanaagsan dadaal la'aan oo aad ku raaxeysato caafimaad wanaagsan.
Cunnooyinka caanka ah ee aan dib u eegnay:
Dhammaan wixii ku saabsan cuntada
Halkan waxaad ku leedahay a soo uruurinta dhammaan qodobbada la xiriira cuntooyinka in lagu daabacay boggayaga internetka. Sida aad u aragto waxaan wax ka qabannay mowduucyo badan iyo dhammaan aragtiyada. Haddii aad dooneysid inaan ka wada hadalno mowduuc gaar ah, waa inaad warqad noogu soo qortaa halkan qaybta xiriirka waana ku farxi doonaa inaan sidaas yeelno.
by Ancaro samee Sannadka 1 .
Tani waa cunto hypocaloric loogu talagalay dhammaan kuwa u baahan inay ku dhaqmaan qorshe miisaan lumis ama ...
Cunto bariiska waa cunno loogu talagalay gaar ahaan dhammaan dadka u baahan dhimista miisaanka ay leeyihiin ...
Tani waa cunto loogu talagalay kuwa u baahan inay sameeyaan cunto si ay u lumiyaan miisaanka maxaa yeelay way ka badan yihiin ...
by Michael Serrano samee 3 sano .
Ma ka daashay mise waad ka xanuunsan tahay baryahan sidii caadiga ahayd? Raacista cunno ka-hortagga bararka waxay kaa caawin kartaa inaad fiicnaan dareento. Waana
by Paul Heidemeyer samee 3 sano .
Maalmaha aan is helno, waxaa jira waxa aan u naqaano «cibaadada jirka», dad badan ayaa ka walwala ...
Ogaanshaha sida loo dedejiyo dheef-shiid kiimikaadkaaga ayaa noqon kara mid waxtar badan leh, gaar ahaan haddii aad leedahay dheef-shiid kiimikaad gaabis ah. Markay kufilan weydo ...
by Ancaro samee 3 sano .
Kani waa cunto loogu talagalay dadka doonaya inay lumiyaan lacagtaas dheeriga ah. Waa xukun ...
Ficil ahaan qofkasta oo nolosheena ka mid ah wuxuu rabay inuu dhimo culeys, ku saleysan jimicsi ama ...
Miisaanka ruxitaanka miisaanka ayaa kaa caawin kara inaad gaarto yoolalkaaga miisaanka. Lagu soo bandhigay qaab cabitaan diyaar ah ama ...
Cunnooyinku waxay naga caawiyaan inaan miisaan lumino waqti cayiman oo nolosheena ka mid ah, haddii aad ka fikireyso inaad miisaanka iska rido, ...
Waxaa laga yaabaa inaan ku qanacsanahay inaan aragno cuntooyin badan oo internetka ah, waxaa jira noocyo badan oo iyaga ka mid ah, qaar kordhiya ...
Cunto aan lahayn bur
Lawska: faa iidooyinka iyo diidmada
Waa maxay fenugreek?
Mooska iyo caano macaan
Cunto bariis ah
Cunto si aad calooshaada u weyneyso 2 maalmood gudahood
Lumiso 1 kiilo 1 maalmood gudahood
Waa maxay nidaamka ketogenic?
Baradho shiidan, cunto nafaqo leh oo aan kaa dhigin cayil
Kaabashka iyo uurka
Rabitaanka cunista galleyda waxay muujin kartaa dhibaatooyin caafimaad
Cunto basbaas leh iyo naas nuujin
Lentils iyo isticmaalkooda